22 HAA, 250 MAYA: Zurab Pololikashvili oo loo magacaabay Xoghayaha Guud ee UNWTO
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Dowladda » 22 HAA, 250 MAYA: Zurab Pololikashvili oo loo magacaabay Xoghayaha Guud ee UNWTO
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • News • Wararka Spain • Dalxiiska • Daalacanayo Hadda • Wtn
Waa qiyaastii laba toddobaad oo keliya ilaa uu Golaha Guud ee UNWTO isugu yimaaddo Madrid si ay go'aan uga gaadhaan haddii talada Golaha Fulinta laga bilaabo Jannaayo si loo xaqiijiyo Xoghayaha Guud ee hadda jira muddo kale la xaqiijin doono.
Qaar badan oo ka mid ah warshadaha socdaalka adduunka ayaa rajeynaya in wasiirada dalxiiska ay u furaan doorasho cusub sababtoo ah tiro badan oo su'aalo ah iyo arrimo badan oo SG ee hadda jira siinaya booskiisa.
Haddii 1/3 dalalka codbixinta ee Golaha Guud ee soo socda aysan dib u xaqiijinayn Zurab Pololikashvili mar labaad oo ah Xoghayaha Guud ee UNWTO, waxaa jira hannaan fudud oo horay loo dejiyay si loogu magacaabo beddelka.
Haddii ay dhacdo in dib loo doorto Xoghayaha Guud, Golaha loo dhan yahay waa in uu heshiiyaa qodobka 9aad ee Doorashada Xoghayaha Guud, halkaas oo uu farayo Golaha Fulinta in la furo hab cusub oo loogu talagalay magacaabista UNWTO. Xoghayaha Guud.
Sahan ay sameeyeen eTurboNews waxay muujinaysaa diidmo wayn oo dib u xaqiijinta Zurab Pololikashvili.
eTurboNews ayaa ka codsaday wasiirrada, wufuudda, iyo xubnaha sarsare ee socdaalka iyo dalxiiska caalamiga ah inay fikradahooda ka dhiibtaan dib-u-doorashada Xoghayaha Guud ee UNWTO ee hadda mar labaad.
Kalfadhiga labaad ayaa waxaa lagu taliyay shirkii Golaha Fulinta ee UNWTO ee dhacay 20-kii Janaayo, taasoo kor u qaaday shaki badan oo ku saabsan sida hawshu u dhacday.
eTurboNews Ilaa maanta waxaa la helay 272 jawaabo iyadoo 22 kaliya ay rabeen inay dib u xaqiijiyaan inuu yahay madaxa UNWTO mar labaad.
Jawaabahani waxay ka yimaadeen Albania, Austria, Argentina, Aruba, Australia, Bangladesh, Bahamas, Barbados, Bulgaria, Belgium, Benin, Brazil, Bulgaria, Canada, China, Ecuador, Eswatini, France, Germany, Georgia, Ghana, Hong Kong, Hungary , India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Ireland, Jamaica, Jordan, Kenya, Latvia, Malaysia, Mauritius, Mexico, Montenegro, Mozambique, Namibia, Nigeria, Norway, Philippines, Poland, Portugal, Saint Lucia, Senegal, Sierra Leone , South Africa, Saudi Arabia, Seychelles, Spain, Somalia, Sweden, Syria, Tanzania, Thailand, Uganda, UAE, UK, Ukraine, Uganda, USA, Venezuela, Zambia.
eTurboNews akhristayaasha ku jira jagooyinka hoggaanka muhiimka ah waxay sameeyeen faallooyinka soo socda si ay u xaqiijiyaan (HAA), si aysan u xaqiijin (MAYA). Qaar ka mid ah jawaabaha ayaa ka yimid ergooyinka codeynaya (wasiirrada), qaar kale oo ka yimid xubnaha hormuudka ah ee socdaalka iyo dalxiiska caalamiga ah.
Dabcan dhageysiga dib u xaqiijinta dhabta ah ee Madrid ee ku saabsan 2 todobaad waxaa go'aan ka gaari doona oo kaliya wasiirada ama safiirada ka qaybgalaya magaca wasiirada.
Waxay qaadataa hal waddan si aad u weydiisato cod qarsoodi ah oo ay iska ilaaliso magacaabista iyada oo loo riyaaqay.
Khubarada ayaa u malaynaya in tani ay lama huraan u tahay codeynta dib u xaqiijinta oo cadaalad ah.
Doodaha lagu helay codka HAA:
Waxay u baahan tahay sii wadida dib-u-celinta Dalxiiska sidii caadiga ahayd. Wakhtigan adag iyo dhacdadan aan hore loo arag waa in aynu helno qof arrimaha Dalxiiska yaqaana oo xidhiidho la samaystay caalamka intiisa kale.
Waayo-aragnimadii hore Zurab Pololikashvili waxay wax ka qaban kartaa xaaladda adag ee hadda jirta. Waa inaan ka taageernaa qalbiga hoose dhinac walba oo aan u bandhigno koox ahaan. Allaha awooda leh ha ina wada barakeeyo. Aamiin.
Dabcan waa in dib loo xaqiijiyaa, haddii ay dadku rabaan in uu dib u soo celiyo waa in uu sameeyo xil labaad Waxa aan u baahanahay waa xikmad ku saabsan arrimahan oo kale si aan loo mashquulin, waxaa jira arrimo kale oo adag oo ku habsaday warshadaha safarka. Waxaan u baahanahay inaan noqono go'aan adag oo aan diirada saarno .
Doodaha lagu helay cod MAYA:
Ma ahayn hal-abuure iyo wax loo dhan yahay
Qof kasta oo awood u leh oo raba inuu arko, dhegeysto oo dareemo gadaashiisa goobta wuu ogyahay Zurab P. inuu yahay Gen Sec UNWTO kii ugu xumaa abid. Nasiib darro tani waxay muujinaysaa Georgia, kuwaas oo ay u badan tahay in aan lahayn saameeyn intaa le'eg. Waxay u muuqataa in aan u qalmin ZP waa nin srow ah oo waddan kale oo awood leh taas oo ka wanaagsan in aan lagu xusin dadweynaha.
Ma uusan samayn wax dadaal ah oo muhiim ah si uu u helo UNWTO.
UNWTO waxay u baahan tahay in si dhab ah loo qaato. Xoghayaha Guud ma dhiirigelinayo kalsoonida - James Hepple, Falanqaynta Dalxiiska
Daacadnimo la'aan; hufnaan la'aan; dhaqamada musuqmaasuqa, ku shubashada codadka maxaa kale oo aad u baahan tahay inaad ogaato?
Wuxuu u baahan yahay inuu ka baxo oo u ogolaado qof ka karti badan inuu maamulo UNWTO
Haddii uu shaki jiro habka loo marayo doorasho cusub. Haddii uu si dhab ah u guulaysto, kuma fikirayo inuu mar kale istaago.
Anigoo ah sarkaal hore oo ka tirsan UNWTO ma aqbalayo habka hadda lagu maareeyo hay'addii aan daacadda u ahaa muddo 36 sano ah!
Dhab ahaantii MA-neoliberalism waxba ma tarto
Tume isbedel. Warshaduhu waxay u baahan yihiin hoggaan adag iyo siyaasad yar. Plus waxay u baahan tahay iskaashi badan oo ka dhexeeya wadamada iyo ururada la xidhiidha dalxiiska.
Haddii isaga la xaqiijiyo waxay keenaysaa in qaar ama dhammaan kuwan soo socda ay lumiyaan xubnaha iyo maalgelinta xubnaha khidmadaha bixiya, Luminta kalsoonida, Dhimashada ugu dambaynta UNWTO ama ugu yaraan luminayso xubinnimadeeda UN.
Shaki aad u badan ayaa la socday ololihiisa. Xulashadiisa dalalkii uu booqday, howlgalka UNWTO iyo natiijada booqashooyinkaas ayaa shaki gelinaya hufnaanta taageerada uu ka helay Golaha Fulinta. U guuritaanka goobta ee Madrid iyo dayacaadda Kenya ee ka dib ayaa ah sabab dheeraad ah oo lagu raadinayo xal aan khilaaf lahayn.
Ma ahan qof daacad ah .. waxay ahayd ceeb ololihii ugu dambeeyay ee uu la galay wasiir Walter Mzembi.
Haddii uu shaki ka jiro daah-furnaanta habka ay guddiga fulintu ku yimaadeen go'aankooda markaas waa in aan Golaha loo isticmaalin sidii shaambad caag ah.
Dhawaan ayuu golaha guud ee Afrika ka soo raray magaalada Madrid ee dalka Spain iyadoo aan wax tixgelin ah la siin Kenya oo racfaan ka qaadatay go’aankaas.
MNeed sii wadida dib u soo celinta Dalxiiska sidiisii ​​caadiga ahayd. Wakhtigan adag iyo dhacdadan aan hore loo arag waa in aynu helno qof arrimaha Dalxiiska yaqaana oo xidhiidho la samaystay caalamka intiisa kale.
Waa musuq maasuqa oo burburiyay hay’adii UNWTO waxay u baahantahay hogaamiye uma baahna kaligi talis musuqmaasuq.
Waxaan u baahanahay doorasho xalaal ah
General Zurab Pololikashvili waxaa dib u doortay Golaha Fulinta bishii Janaayo iyadoo ay jiraan xaalado shaki leh. Waxaan rajeynayaa in iftiin daacad ah oo dhab ah uu u yimaado niyadooda iyo sidoo kale dowladaha ka socda wadamada ay matalaan.
Lumay daah-furnaan, si xun loola dhaqmo ganacsiga gaarka loo leeyahay, ciyaaro badan oo uu ku ilaashado shaqadiisa, xirfad la’aanta iyo joogitaanka, kor u qaadida dadka khaldan ee gudaha UNWTO sida ay u doorteen dano kale oo aan ahayn xirfad shaqo iyo karti.
Waxaan u baahanahay isbedel. Afrika waa in la siiyo fursad ay ku hogaamiso UNWTO markii ugu horeysay.
Waa bilow hore. Ma garanayo ABC ee dalxiiska. Waxa uu dacaayad u samaynayaa dadkiisa isaga oo aan tixgalin xeer iyo xeer.
Isagu uma qalmo shaqada.
Ka qayb qaadashada siyaasadda qaranka ee Spain ka qaybgalka shirweynaha xisbiga caanka ah (xisbiga mucaaradka). Sida laga soo xigtay Xafiiska Anshaxa ee Qaramada Midoobay: - Waa inaad ka fogaataa dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee si xun uga tarjumi kara Qaramada Midoobay, ama hoos u dhigi kara madax-bannaanidaada iyo dhexdhexaadnimadaada. – Iska ilaali kor u qaadida mansabyada siyaasadeed ee qaranka ama soo bandhigida taageerada musharaxiinta siyaasadda marka aad shaqada ku jirto. - Ha matalin naftaada xubin ka mid ah shaqaalaha Qaramada Midoobay marka aad saxiixdo codsiyo ama aad samaynayso dhaqdhaqaaq siyaasadeed. Zurab ayaa Twitterka ku muujiyay ku lug lahaanshaha ay ku leeyihiin siyaasada Isbaanishka: https://twitter.com/pololikashvili/status/1443230304240644096?s=20 https://twitter.com/pablocasado_/status/1443302875556466690?s=20
Magacaabidda Agaasimaha Xubnaha Xiriirka, Mr Ion Vilcu: Safiirkii hore ee Romania u fadhiyay Isbeyn, halka Zurab uu ahaa Safiirka Georgia - Wax raad ah oo dalxiiska la xiriira khibradda Ion Vilcu ma jirto.
Xubnaha ku xidhan waxay lumiyeen dhammaan codkii UNWTO. - Xubno badan oo ka tirsan Affiliate-ka ayaa u gudbiyay UNWTO sida ay uga xun yihiin xaqiiqda ah in ku dhawaad ​​​​wax shaqo ah aan la qaban, iyo in Agaasimuhu kaliya la shaqeeyo koox la soo xulay oo xubno ka ah, oo u badan Madrid.
Kaliya tuhunka laga qabo duruufaha la is weydiin karo ee ku saabsan dib-u-doorashada ayaa caddaynaysa maya
Wakiilka saboolka ah ee dalxiiska caalamiga ah gaar ahaan inta lagu jiro dhibaatada Covid-19.
Pololikashvili waxa uu fadeexad guud, odium, iyo quudhsi ku keenay UNWTO. Dhaqankiisa gurracan ma ahayn wax laga naxo. Ma aha mid aan u qalmin in uu hogaamiyo ururkan, waxana uu sii wadi doonaa in uu sumcadda iyo sumcaddaba meel kaga dhaco haddii uu xilka sii hayo. Waxaan idhi Riddance wanaagsan! Ururku wuxuu u baahan yahay musharrax la aamini karo oo hufnaan leh kaasoo ahaa xirfadle wershadaha dalxiiska oo la aqoonsan yahay - qof sida Carlos Vogeler oo Isbaanish ah oo Zurab sidoo kale ula dhaqmay si xun.
Ma matalo qiyamka hay'adda Qaramada Midoobay
Waxaa jira musuqmaasuq aad u badan.
Waxaad mooddaa inuu gebi ahaanba musuqmaasuqay. Aanan UNWTO wax wanaag ah u samaynin aragtida caalamiga ah, iska daa waaritaan iyo ajendaha anshaxa: Inta kale ee UNWTO/UN waa inay u istaagaan sidii ay u joojin lahaayeen jahwareerka iyo ceebta.
Waa ku filan tahay! Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay waa inuu noqdaa qof furfuran oo dulqaad badan. Oo dabcan aad uga aqoon badan dhammaan dareennada. Ma jirto meel loogu talagalay khiyaamooyinka iyo ciyaaraha qarsoon ee Ururka heerkan oo kale ah. Taleb Rifai wuxuu u keenay booskan si fiican ayaan u xasuusannahay! Mahad-naqsi loo sameeyay, iyadoo laga hinaasay sumcadda iyo ahmiyadda uu qofkani u leeyahay bulshada caalamka oo dhan, waxa uu go’doomiyay hay’adda UNWTO, waxaana la joojiyay dhammaan is-gaarsiinta. Tani waa dharbaaxo wejiga kaliya maaha Taleb, laakiin sidoo kale qof kasta oo u codeeyay Pololikashvili talada Rifai. Adduunka oo dhan.
Zurab Pololikashvili waa mid anshax xumo ah oo aan lahayn karti uu ku noqdo Xoghayaha Guud ee UNWTO - waa in xilka laga qaado.